Hatsikana sy mozika : hiverina ny “Kakakaka Kaïamba” | NewsMada
Hatsikana sy mozika : hiverina ny “Kakakaka Kaïamba”
Ela izay! Vaovao lehibe ho an’ireo mpankafy, hiverina indray ny “Kakakaka Kaïamba”. Endri-tseho nanaitra ny maro ka nahasarika mpijery marobe izy ity, tany amin’ny taona 2002 tany ho any. Nitsiry tao amin-dry Gothlieb, Francis Turbo ary ny tarika Fou Hehy mantsy ny hevitra tamin’izany, ny hamerina indray ireo “vazo kaïamba”.
Nangina fotoana ela ka toy ny rivo-baovao nitsoka eo amin’ny mozika indray ny nahenoana ireo hiran’ny taona 70,80,90, nataon’ireo mpanao hatsikana ireto. Nanome aina vao ireo hira rahateo ilay lafiny mampihomehy ao anatiny. Noraisin’ny mpankafy tsara ry “Very maina”, “Aporatiana”, “Misaotra mama”, “Kotrobaratra”, sns, tamin’izany fotoana izany. Nanaraka avy eo ireo hira hafa toy ny an’ny tarika Ny Voanio, sns.
Nikitika ary azo lazaina fa namerina sy namoha indray ny fitiavana ny “vazo kaïamba” ny “Kakakaka Kaïamba”. Taitra noho izany rahateo ireo tompon’ny hira ka niverina an-tsehatra, tanatin’ny “Kaïamba tena izy”, izay lasa anarana tarika ihany koa taty aoriana.
Nanomboka teo, niaka-tsehatra hatrany ny mpanao kaïamba. Tsy tazana an-tsehatra intsony kosa ny “Kakakaka Kaïamba”, na maro aza ireo nangataka izany. Ho azy ireo indrindra ny fampisehoana hanamarihana ny fiverenana, izay hotontosaina ny zoma 8 septambra ho avy izao, manomboka amin’ny 8 ora alina, etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina.
Araka ny nambaran’ny mpikarakara ao amin’ny LH Pro, hasongadina mihitsy ilay lafiny maha fampisehoana hira sy hatsikana miaraka, amin’io. Hahazo fanomezana manokana ireo mpijery ho avy ka manao fitafiana nahafantarana ny kaïamba…